Best Apps Android: 30 Great Android Apps si uu u daawado TV oo Movies
1.1 Android Apps si uu u daawado TV oo Movies
1.2 barnaamijyadooda iPhone si uu u daawado TV oo Movies
1.3 Apps in ay daawadaan ciyaarta kubadda cagta ee TV
1.4 Android Apps si uu u daawado TV Online
2 TV Goobaha
2.1 TV Show Goobaha
2.2 Goobaha loogu TV Sports
2.3 Goobaha si Download 3GP TV muujinaysaa
2.4 Goobaha si uu u daawado Spanish TV muujinaysaa
2.5 Goobaha si uu u daawado Hindiya Live TV
2.6 Goobaha si uu u daawado TV Live Cricket
2.7 Goobaha Noolaado Soccer TV
2.8 Goobaha si uu u daawado TV Ruushka
2.9 Goobaha si uu u daawado Romania TV
3 TV Talooyin
3.1 Connect iPhone / iPad in TV
3.2 Connect Android inay TV
3.3 Download TV muujinaysaa
3.4 TV ka USB Play
3.5 Stream ka PC in TV
3.6 Stream ka Phone in TV
3.9 Play Lugood on TV
3.10 Stream ka VLC in TV
3.11 Mirror PC in TV
3.12 Siyaabaha Daawo Movies on TV
Qeybta 1: 30 Great Android Apps si uu u daawado TV oo Movies
Qeybta 2: Download Video Free la TunesGo Wondershare
Daawo channels TV ka adduunka oo dhan ku saabsan qalabka telefoonada gacanta, iyadoo fursad u heysata inay sii qulquli content in ay TV dhaw. Dhaqanka DVR Jadwalka iyo waxay leeyihiin oo dhan dhacdooyinka aad jeceshahay diyaar kugu sugaynay jidka. Taageerada in ka badan 300 TV live channels iyo 600 channels VOD, iyadoo ku dhowaad 45,000 oo xafidayaa videos taariikhda.
Furitaanka app this kuu tilmaami doona website ay ku qorantahay oo dhan channels geeyo TV online. Idaacadahaas waxaa lagu kala soocaa by category ah, sida madadaalada, kartoonada, isboortiga, music, iwm waxbarasho oo ka mid ah sigaar Channel, Dragonn TV, DW TV iyo qaar kale oo badan, hubinta waxaa jiri doona qof walba wax u.
TVdream qaadataa daawashada TV ku saabsan qalabka telefoonada gacanta talaabo dheeraad ah iyo u yeelaa TV xudunta daawashada waayo-aragnimo la degan ee add-tago bulshada, sida awood u leeyahay inuu abuuro playlists kuu gaar ah iyo iyaga wadaagaan via shabakadaha bulshada. Si fudud soo qaado channels aad jeceshahay, PLAY saxaafadeed iyo dib u bilaaban.
Price: Free, laakiin dalabyada-app iibsadaan $1.94 boqolkiiba item.
4. saxan meel
Saxan meel u baahan tahay xisaab online, laakiin waxay bixisaa awood u leh inay la qaata network socon qulquli live TV content via DVR in qalab mobile. Haddii aan xisaabta, waxaa weli feature Baahida On the, oo ay ku jiraan boqolaal filimada iyo muujinaysa ka shabakadaha kala duwan.
Watch Free TV waa app ugu sahlan ee noociisa ah ee Google Play Store. Design nadiif ah, interface fudud iyo shaqo raadinta ah kayeel app waa-leeyihiin kuwa aan qiyaasi kartaa maalin aan qiyaasta barnaamijyada TV.
App Tani ammaan ugu ka daawadayaasha gudaha iyo kuwa caalamiga ah urursatay bixinta badan oo xul ah kanaalada lacag la'aan ah. Waa dunida oo dhan ee TV-ga, midig ee farahaaga. App waxay u baahan Android 4.3 ama wax ka sareeya.
Price: Free, laakiin dalabyada-app iibsadaan $ 0.9- $ 11.14 per item.
7. Watch TV 3600 kanaalada Online
God Times cable aad, tan iyo app this siinayaa more channels TV badan aad ku riyoon kari. Sidoo kale yimaado oo la duuban iyo Converter ah loogu talagalay kama dambaysta ah oo karo. Watch TV muujinaysaa wakhti kasta, meel kasta.
Daawo TV live iyo baahiyey video ah oo kuu gaar ah ula shaqeynayaan this app ee loo dhisay. Ula xidhiidh la daawadayaasha ka mid ah durduri soo saaray warmurtiyeed doorashada ama si fudud by sheekeysanaya. Xubin Premium ka saaraysaa xayeysiiska ka app.
App Tani waxaa haboon labada Indonesia u dhashay iyo dadka isticmaala caalamiga ah ee ay doorashada ka badan 40 channels TV. Jaraaidka ka saaraysaa xayeysiiska oo waxaa jira fursad u ku dhiirigelinayaan in uu si toos ah uga app tweet.
Price: Free, laakiin dalabyada-app iibsadaan $ 1.02- $ 32.26 per item.
App Tani waxa ay diiradda saartaa bixinta TV live content in qeexitaanka sare in dadka isticmaala ay 24/7. Mid ka mid ah feature gaar ah waa Turkish operas saabuun riwaayado, laakiin app kaloo diiwaan gelin kartaa, il iyo wadaagaan content wax ka qalab.
11. US TV Networks kanaalada - List
Inkasta oo aan awoodin in ay si dhab ah u muujiyaan content TV, app tani waa liis dhamaystiran oo dhan channels TV heli karo dalka Maraykanka. Ha illoobin ku saabsan weyn TV Hanuuniyaa - waxay la mid yihiin qashinka warqad. App tani ka badan, waa mid aad u fudud in ay isticmaalaan oo ka shaqeeya sida soo jiidashada ah.
Qor dhacdooyinka oo dhan la tuubada kaliya oo aan u daawado mar kasta oo aad dareentid in aad rabtid. Ha illoobin ku saabsan xadeynta, app la joogo ma jiro inuu ku siiyo xadidneyn TV daawashada waayo-aragnimo. Sidoo kale waxa uu leeyahay "hakinta" iyo "dib u socon" hawlaha, marka aad dhab ahaan doonayaan inay daawadaan ku celiska ah in.
200 channels nool, 500 channels VOD oo ka badan 200,000 oo videos heli karaa archive ah. Kuwaas oo isugu jira sports in dokumantaaryada carwooyin iyo madadaalada, app siinayaa TV aficionado ugu wanaagsan ee barnaamijyada la buunbuuninayo lahayn. Waxay bixisaa TV channels weyn oo ka socda Yurub iyo Bariga Dhexe.
14. Live Sports TV
Cricket, kubada cagta, rugby iyo qaybaha kale ee isboortiga ayaa diyaar u ah arkaysid iyada oo app this. Daawo ciyaaraha live on go ah oo mar dambe ma seegi daqiiqad hal garoomada ciyaaraha waa weyn. Waxaa ka mid ah xulalka qaranka iyo horyaalada ka Afghanistan, Pakistan, Nepal iyo dalal kale oo badan.
15. Mobile TV oo bilaash ah
Daawo channels TV ku saabsan qalabka telefoonada gacanta ee 24/7 HD (halkii la heli karo). Dhammaan waxa aad u baahan tahay waa internet-ka oo aad diyaar u tahay in ay la kulmaan xorriyadda dhabta ah ee fankooda channel. Dooro ka badan 200 channels TV gebi ahaanba bilaash ah.
Oo dhan rabtaa Access aad marti on YouTube via app this. The shaqo raadinta dhisay-in kuu ogolaanayaa inaad u xalliso filimada sida ay keyword ah iyo sidoo kale iyaga shaandhayn ku salaysan ay Cinwaan, xallinta iwm taageero luuqadaha badan oo bookmarking ee filimada aad jeceshahay waxaa lagu daray.
17. Plex u Android
Tani waa qabanqaabiyaha ah warbaahinta boosaska badan oo heer sare ah functional qalabka Android. Beddelaan, share, u hagaagsan oo gurmad warbaahinta si aad u bixiyaha daruur oo aad doorato ah. Iyadoo Media Plex ee Server lagu rakibay, waxa kale oo aad sii qulquli karaan warbaahinta gudaha si ay wax qalab kale oo lagu dhegeysan mobile ama TV.
Price: Free, laakiin dalabyada-app iibsadaan $4.99 boqolkiiba item.
App wuxuu isticmaalaa archive internetka ee filimada domain shacabka si Classics filim aad ee HTML5. Dhamaan filimada ee liiska ku jira gabi ahaanba xor ah oo ka mid ah westerns, filimada farxaan, Sci-Fi, biimayn ah iyo qaar badan.
19. IMDb Movies & TV
IMDb.com waa adduunka ee ururinta ugu weyn ee macluumaadka ku saabsan filimada, bandhigyada TV, kulan video iyo noocyada kale ee warbaahinta dhijitaalka ah. Browse, ogaado, heerka, comment oo ka dood foomka warbaahinta jecel la users kale iyada oo ku dhisneyd iyo app dareen leh.
App Tani streamlines habka doorashada iyo daawashada aad ugu jeceshahay filim Hollywood ama TV show. Bonus An daray waa Crackle ee show asalka - Majaajiliiste in Baabuurta Helitaanka Coffee. Isladooda, kuwii ku jeclaa oo caraf doono dalab this app ee ka badan 40 Isladooda taxane in fidin badan 1,000+ dhacdooyin. App Tani waa heli kara oo keliya dadka isticmaala ee Ameerika iyo Australia.
21. JustWatch - Movies & TV muujinaysaa
Helitaanka durdur movie free online mararka qaarkood waxay noqon kartaa mid dhibaato badan waxaa qiimo leh. Taasi waa sababta habka ugu sahlan waa in aad fiiriso distributers warbaahinta dhijitaalka ah ee waaweyn, sida Hulu iyo Netflix. App Tani waxay kaa caawinaysaa in aad raadiso filim ama show ah iyada oo kaydka ciidammadu wuxuu warbaahinta iyo ka heli meesha ugu fiican si ay u daawadaan content aad rabto waa meesha.
Loogu talogalay si ay u sii qulquli content website-ka Putlocker, app waxay u baahan tahay MX ka Player in ay si fiican u shaqeeyaan. App waa hadda in version 0.0.1 iyo sida oo kale waxaa laga yaabaa in aysan haysan dhammaan shaqeynayaan qoraaga dhaqan galin doonta dambe ee meertada app.
Filimada Bollywood iyo Hollywood ka hor tago app this. Daawo movies classic ka mid ka mid ah labadan xarun movie waaweyn iyo saacadaha si fudud u duulaa doonaa. Dhamaan filimada waxa lagu marti on YouTube, hubinta loo maqli karo oo lagu kalsoonaan karo iyo video tayo sare leh.
24. GoWatchIt Movie Search & safka
Theatergoers ogahay inaan wax garaaca waayo-aragnimo ah ee daawashada filim wanaagsan ee shineemo oo tayo sare ah. Iyadoo app this, baadhaan dhex shineemooyinka, bixiyeyaasha warbaahinta ama ilo kale oo warbaahinta dhijitaalka ah si aad u ogaato meesha aad horyaalka aad raadineyso weeyna ka heli kartaa.
Sandal ee app tani tahay doorashada balaadhan oo ah filimada madax banaan iyo bandhigyada. Korea, Japan, Ghana iyo dalal kale ay si caddaalad ah ku matalayay app this oo ay la yimaadaan filimada si buuxda Sabtaytal in English, Spanish, Faransiis, Jarmal iyo luqadaha kale ee waaweyn.
26. Viewster - Movies, TV & Isladooda,
Halkii ay muujinayso sugayo iyo filimada, app ku jahaysan yahay Isladooda dahsoon, bandhigyada TV iyo filimada madax banaan. Waxa kale oo ay webiyo iidda Viewster movie (VOFF). Xayeysiis Marmarka waxaa lagu ciyaaro markii app tani waxaa hoorto content.
Rasmi Google ayaa Play app oo u oggolaan doonaa in aad si aad u daawato filimada kasta oo kiro ah ama iibsaday dukaanka. Isticmaalka app la Chromecast ay hubisaa in loo maqli karo siman on TV kasta oo guriga ku nool. Xilligan la joogo, app kaliya ee u shaqeeya users ka Canada, Maraykanka, UK, Japan iyo Australia.
28. Movie Showtime - Tiyaatarka
In kasta oo aan awoodin in ay bixiyaan filimka ka shaqeynayaan geeyo, app this badan ka dhigaysa iyada aawadeed ay warbixin ku saabsan shineemooyinka iyo sii daayo movie. Waxa kale oo suuragal ah in la abuuro Facebook filim daawashada dhacdooyinka iyo filimada heerka dhex app this.
Price: Free, laakiin dalabyada-app iibsadaan $ 3 item.
29. Movies Online
App Tani waxay bixisaa content filimka lacag la'aan ah, inta badan diiradda ku saabsan qaybaha riwaayado iyo riwaayadaha la xiriira ka China, Vietnam, Korea iyo Filibiin. Waxaa jira xayeysiiska soo bandhigay in calan hoose ee app. Aqoon adag ee Shiinaha iyo Vietnamese waxaa lagu talinayaa, tan iyo markii ay jiraan subtitles lahayn.
10,000 oo saacadood oo HD Hollywood maadada baahida in tayo sare leh oo Thailand iyo Ingiriisi subtitles. Maxay ka badan lover filim codsan kartaa? App Tani kaliya u shaqeeya dadka deegaanka Thailand.
Wondershare TunesGo - Download, Bedelka iyo Maamul Videos / Music for Your macruufka / Android Devices
YouTube sida aad Video Personal iyo Music Source
Movies Transfer / Music dhexeeya Qalabka kasta
Online Tools abuurka: Sida loo Dallaga Video Online ah
Best Talo & Tricks in Noqo User Power of iPhoto '11
Video Watermark - Sida loo Watermark Video ah oo la Video ama Photo
Sida loo Download ESPN Video
> Resource > Video > Best Android Apps: 30 Great Android Apps si uu u daawado TV oo Movies